अण्डरवल्डका डन दाउद भेट्न दुवई जान्थे लोकमान | abc.com.np
अण्डरवल्डका डन दाउद भेट्न दुवई जान्थे लोकमान
काठमोडौं । सन् १९९३ को मुम्बई सिरियल बम ब्लास्ट काण्डका मुख्य दोषी अण्डरवल्डका डन दाउद ईब्राइम भेट्न तत्कालिन अर्थ सचिव लोकमानसिंह कार्की पटक–पटक विदेश गएको भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ ले तयार पारेको एक प्रतिवेदनमा भेटिएको छ । तत्कालिन अर्थ सचिव कार्की अहिले अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा प्रमुख आयुक्त रहेका छन् । सन् २००१ मा ईन्डिया टाइम्सले सार्वजनिक गरेको उक्त गोत्य प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘अर्थ मन्त्रालयका अर्थ सचिव जो जमिम साहसँग निकट मानिन्छन्, लोकमानसिंह कार्की पटक–पटक दाउद ईब्राइमलाई भेट्न दुवई र लण्डन जाने गरेका छन् ।’
डन दाउद ईब्राइम अर्थात डी कम्पनीले तयार पारेको नेटवर्कबाट दुवई, कतार, मलेसिया, सिंगापुर, हङकङबाट नेपालमा सुन तस्करी गर्ने र उनलाई सहयोग पुर्‍याउने सूचि समेत रअको प्रतिवेदनमा छ । रअले नेपालमा डी कम्पनीको नेटवर्कमा रहेर अवैध सुनको तस्करी गर्ने, नक्कली भारुको र्‍याकेट चलाउन सहयोगी भूमिका निभाउने तथा मुम्बई ब्लास्टपछि नेपालमा लुक्न आएका अपराधीलाई आश्रय दिने सूची पनि तयार गरेको थियो । मुम्बई ब्लास्ट र त्यसपछि डी कम्पनीको नेटवर्कबाट नेपालमा सुनको तस्करी गर्ने सूचीमा नेपालका चर्चित ब्यापारी समेत रहेका छन् । डी कम्पनीद्धारा नियन्त्रित सुन तस्करी गर्ने सूचीमा स्वर्गीय जमिम साह, उनका छोरा तहिर, दिपक मल्होत्रा, प्रकाश टिवडेवाल, शंकर गोल्यान, विनोद भिमसरीया, अनिल जाटिया, रविन्द्रलाल श्रेष्ठ, सुवर्णलाल श्रेष्ठ, जितेन्द्रलाल प्रधानलगायत रहेका छन् । उनीहरुले अहिलेसम्म पनि दाउदको नेटवर्कबाट सुनको तस्करी गरिरहेको स्रोतको दावी छ । नेपालका क्यासिनो, होटल, हाइड्रोलगायतमा समेत डी कम्पनीको लगानी रहेको थियो । तर रअले डी कम्पनीमा लगानी भएको होटल काठमाडौं, कर्णालीलगायतलाई सदाका लागि बन्द गराइसकेको छ । ती होटल बन्द हुनुमा समेत रअको हात रहेको स्रोत बताउँछ । मुम्बई ब्लास्टपछि होटल काठमाडौं र कर्णालीमा आतंकवादी लुकेर बस्ने गरेको रअको रिर्पोटमा छ । नेपालका क्यासिनोमा डी कम्पनीको लगानी भित्र्याउने अमेरिकी नागरिक टटल र भारतीय नागरिक राकेश वादवा लगानी समेत नेपालबाट पलायन भइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएझै दिपक मल्होत्रा अहिलेपनि नेपालको सवैभन्दा ठूला सुन तस्करका रुपमा चिनिन्छन् । सुवर्णलाल श्रेष्ठ जो अहिले पनि लोकमासिंह कार्कीसँग प्रायजसो भेटिने गर्छन् । कतियपय कर्मचारीका मोलमोलाईको काम समेत श्रेष्ठमार्फत तमाम हुने गरेको छ । बैशाख १२ गेतको महाभूकम्पपछि पाल, त्रिपाल खरिद काण्डमा समेत कार्की मुछिए । त्यति ठूलो भ्रष्टाचार छानविन नहुनुमा एउटै कारण छ–मल्होत्रासँग उनको ब्यापारिक साझेदारी र मन्त्रालयले खरिद गरेका सयौं पाल, त्रिपाल स्वयम् आफैले लिएर राहत बाँड्ने नाममा दुरुपयोग गर्नु ।
किनकी मल्होत्राले कार्कीकै निर्देशनमा पिपाल खरिद गर्ने करोडौंको ठेक्का हासिल गरेका थिए । करिब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको घोटलामा २५ करोड घोटला भएको त सरकारी प्रतिवेदनले नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले छानविन गरेर सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार भएको पुष्टि गरिसक्दा समेत अहिलेसम्म अख्तियारले दोषीलाई कारवाही गर्न सकेको छैन् । सरकार मातहत सरकारी निकायले नै भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहँदा समेत कार्की किन कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैनन ? यसले पनि उनको संलग्नतालाई थप पुष्टि गरेको छ । उता रअले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेझै उनको सम्वन्ध नेपालका प्रायजसो तस्कर, माफिया, नवधनाड्य, भ्रष्टसँग नै बढी हुने गरेको छ । आँखिर किन उनी दुवईसम्म डी कम्पनीका प्रमुख अन्डरवल्र्डका कुख्यात डन दाउद ईब्राइमलाई भेट्न पुग्थे ? अर्थ सचिव हुँदा त्यस्तो के काम थियो ? कार्कीले दाउदलाई भेट्नु पर्ने । यदि उक्त प्रतिवेदन गलत लेखेको हो भने अहिलेसम्म कार्कीले किन मुख खोलका छैनन ? जसको उत्तर कार्कीले दिन जरुरी देखिएको छ । त्यसो त सामसुम मोबाइल विक्रेता भएको ढोंग गर्ने मल्होत्राले नै कार्कीको पुरानो बानेश्वरस्थित ओरालो हाईटमा रहेको विशाल घर भाडामा लिएका छन् । सुन तस्करी प्रयोजनका लागि उक्त घरको प्रयोग हुने गरेको छ । मासिक तीन लाख भाडामा कार्कीले मल्होत्रालाई दिएता पनि मल्होत्राले भने मासिक पाँच लाख रुपैयाँ दिने गरेको बताउँदै हिडेका थिए । कार्की, तस्कर गोविन्द सरिया र मल्होत्राको साझेदारीमा नेपालबाट अर्को पनि ब्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छ । त्यो हो–बङलादेशी प्रख्यात प्राणको उत्पादन नेपालबाट विक्री वितरण गर्नु । यो काम सरिया र उनका छोरा दिनेशमार्फत हुने भएतापनि कार्की र मल्होत्राको समेत सेयर रहेको स्रोतको दावी छ । झापातिरका सरियाले रक्तचन्दन तस्करीदेखि नेपालमा हुने प्रायजसो तस्करी गर्न केही बाँकी राखेको छैनन् भन्दै मंगलबार प्रकाशित जनप्रहार साप्ताहिकले छापेको छ ।